OS X လုံခြုံရေးလက်မှတ်များပြproblemsနာများ ငါက Mac ကပါ
Mac App Store တွင်လုံခြုံရေးလက်မှတ်များပျက်ကွက်ခြင်း
အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုခြင်းကိုရှုပ်ထွေးစေသည် OS X အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၏လုံခြုံရေးလက်မှတ်များအကြီးအကျယ်ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့်အက်ပဲလ်ကအက်ပလီကေးရှင်းများ၏လုံခြုံရေးလက်မှတ်များသက်တမ်းတိုးခြင်းမပြုလုပ်ကြောင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများကြောင့်ထိုပျက်ကွက်မှုဖြစ်ပွားသည်။ ကလက်မှတ်အမှားပေးခြင်းအလိုအလျောက်ပိတ်.
သုံးစွဲသူများထံမှလာသည့် developer များထံမှတိုင်ကြားချက်များစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအက်ပဲလ်အနေဖြင့်၎င်းလက်မှတ်များ၏သက်တမ်းကို ၂၀၃၅ အထိတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အမှန်တကယ်တွင်မူဤလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပုံရသည် ပြနာနှင့် လျှောက်လွှာကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းလည်းမရှိပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop ပေါ်မှာအမှားစတင်သောအခါဒိုင်ယာလော့ခ် box ထဲမှာညွှန်ပြအဖြစ်တစ်ခုလုံး။
developer များကိုယ်တိုင်သုံးစွဲသူများစွာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောပြtoနာကိုဖြေရှင်းရန် Apple အားဖိအားပေးနေသည်။ သို့သော်ပြaroundနာကိုကျော်လွှားရန်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်မှာ Mac App Store ရှိခုန်တိုင်းအချိန်တိုင်း username နှင့်စကားဝှက်ကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ Applications ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အမှား - ယခုဤအရာသည်၎င်းတို့အတွက်မရှိတော့ပုံရသည်။ Apple ကဒီပြproblemနာကိုပြုပြင်ပေးရမယ် ၎င်းသည်ပြီးသားပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ပြီးနှင့်လက်မှတ်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လျှင်အသုံးပြုသူများသည်ဤပြproblemနာကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်အမှု၌ကျွန်ုပ်၌ဤပြproblemsနာများမရှိပါ (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောလျှောက်လွှာများ) သို့သော်အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည် ငါ့စာမျက်နှာ app ကမွမ်းမံရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ အဲဒါကို Mac App Store မှာတောင်းပေမဲ့ ငါထင်တာကတော့ဒါကငါ့ရဲ့ပြproblemနာဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ iWork suite မှန်မှန်ကန်ကန် install လုပ်ပြီးကတည်းက Mac ကိုစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » Mac App Store တွင်လုံခြုံရေးလက်မှတ်များပျက်ကွက်ခြင်း
ဒါဝိဒ်သည် gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Mac ပေါ်က 1Password လက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြproblemsနာရှိခဲ့တယ်။ Apple ID ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါပြေလည်သွားပြီ။ စာမျက်နှာများကိုလေးစားမှုအရ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုနှစ်ကြိမ် update လုပ်ပြီးပြီနှင့် Store သည်ထပ်မံပေါ်လာလိမ့်မည်။
စာမျက်နှာများကို Mac install လုပ်၍ ပြန်လည်စတင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ပုံရသည်၊ အနည်းဆုံးယခုကျွန်ုပ် update ကိုထပ်မံမရတော့ပါ။
Jordi ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် MacBook Pro Retina ကို OS X El Capitan သို့မွမ်းမံပြီးကတည်းကငါ iCloud အကောင့်မှာပြproblemsနာတွေစတင်ခဲ့တယ်၊ ဒီစာကငါ့ကို (Verification Error) ပြောလိုက်တာပါ။ ဆိုင်းငံ့ထားသောမွမ်းမံမှုများ7ကို FaceTime, iMessage, ဒါမှမဟုတ် update မလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် Safari မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်၏ iCloud အကောင့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်သဖြင့်ပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်၏ Mac နှင့် El Capitan တို့တွင်ဖြစ်သည်။ ငါ Apple ကိုဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား ??
မင်းကိုလည်း Olga မှနှုတ်ဆက်သည်။
ထူးဆန်းသည်မှာ Apple သည်အကူအညီမပေးနိုင်ပါ။ (သင်၌ဆိုးဝါးသောနေ့တစ်နေ့ရှိသည့်အော်ပရေတာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်) သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပြClနာဖြေရှင်းခြင်းရှိမရှိကြည့်ရန် iCloud ကိုထပ်မံပြုပြင်ရန်ကြိုးစားပါ။ System Preferences> iCloud သို့ သွား၍ အကောင့်အသေးစိတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ FaceTime နှင့် iMessage သည်တူညီသောအချက်အလက်များနှင့်ရိုက်ထည့်ပြီးအချက်အလက်အားလုံးမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ဂျိုဒီကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအရမ်းတော်တဲ့ Apple Technician တစ်ယောက်ပါ။ သူကအမှားတစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ malware တခုကိုတွေ့ခဲ့တယ် တစ်စုံတစ် ဦး သည်တူညီသောပြhadနာရှိပါကကျွန်ုပ်သတင်းပို့သည်။ ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာညနေခင်း Olga ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါ“ captain” သို့ update လုပ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်၏ macbook pro retina နှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသင်သိသည်ကိုသတိပြုပါ။ Apple ID server နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ iCloud account နှင့်တူညီသော error message ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ခင်ဗျားဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲဆိုတာကိုမင်းညွှန်ပြနိုင်တယ်။
ငါ Apple ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်အတွက်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းလိုက်တယ်။ ပြproblemနာကအက်ပလီကေးရှင်းများမှမဟုတ်သောပရိုဂရမ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုပ် လုပ်၍၊ ၎င်းတို့သည် UTorrens မှကူးယူပြီး iCloud ကိုဆက်သွယ်ခွင့်မပြုသည့် malware တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ပြင်ပ disk တွင် Mac BackUp လုပ်၍ Apps Store မှမဟုတ် Mac ကို format လုပ်သောပြdeleteနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်သည်ပြtheနာကိုတစ်ခုတည်းဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ငါအရာအားလုံးကိုပြု။ ငါ UTorrens နေဆဲပြtheနာရှိခဲ့ပါတယ်စဉ်။ သင်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ပြhelpedနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်လျှင်သင်သူ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ Mac နည်းပညာရှင်ရဲ့အီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်သိမ်းထားပါပြီ။ ကံ
Lautaro Pardo ဟုသူကပြောသည်
Olga, မင်းကိုပြforနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့နည်းပညာရှင်ဆီကအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးလို့ရမလား။ ငါမှာထပ်တူထပ်မျှပြhavingနာရှိနေပြီးသူတို့က Apple Technical Service ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှန်းမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Lautaro Pardo အားစာပြန်ပါ
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း။ Apple စတိုးသည်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုခြစ်ရာများမှဖယ်ထားသည့်အတွက် Apple ID သည်ဘာကြောင့်မဖမ်းဆီးရသလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Apple စတိုးကဘာမှမပြောင်းချင်ဘူးသို့မဟုတ်ဘာတစ်ခုမှဒေါင်းလုပ်မလုပ်ချင်လို့ပါ။ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
Hello Jordi ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကူညီနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သော်လည်းအောက်ပါဒဏ္withာရီပါပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ICLOUD ID CONNECTION VERIFICATION နှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်
နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ Apple Pay အသုံးပြုသူများအကြားငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသည်
သြစတြေးလျမှ Apple Store မှမန်နေဂျာသည်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအတွက်စွပ်စွဲခံရသည်